မိုးစကျ Archives - ShwengweGames
Categories Celebrities Tags Celebrity, Moe Sat, မိုးစကျ Leaveacomment
ရခေဲထုပျရောငျးပွီး သမာအာဇီဝကကြလြုပျကိုငျစားသောကျနတေဲ့ အဖှားတဈဦးအား ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မိုးစကျ
January 13, 2022 by Shwengwe Games
မိုးစကျက ကိုယျတိုငျလညျး ရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးလေးတှစေုပေါငျးပွီးလှူဒါနျးသလိုအမြားစုပေါငျးအလှူတှမှောလညျး လုပျအားဒါနတှကေူညီလရှေိ့ပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့လညျးပရိသတျတှအေားလုံးက မိုးစကျကို လေးစားခဈြခငျနကွေတာပါ။
ဒါတငျမကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတှကေိုလညျး အားလုံးမွငျတှပွေီ့းပီတိဖွဈရအောငျလညျးရေးသားဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ။ဒီနမှေ့ာတော့ ၁၀ နှဈကြျောကွာထိရခေဲထုပျရောငျးပွီးသမာအာဇီဝကကြလြုပျကိုငျနတေဲ့အဖှားတဈဦးအားကူညီခဲ့ပုံကိုပွောထားပါသေးတယျ။
“အရငျတုနျးက ရောငျးကောငျးပါတယျအခုတော့ တျောတျောပါးသှားပွီ””မပူပါနဲ့ဗြာအဖှားရခေဲထုပျရောငျးနတောကိုအားပေးဖို့လမျးညှနျလိုကျတဲ့လူရှိလို့အဖှားဆီကို တကူးတကလာခဲ့တာပေါ့””ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ”
“ရခေဲထုပျကဘယျလိုရောငျးတာလဲ အဖှား””တဈထုပျ ၁၀၀ ပါ””ဒီမှာကနျြတဲ့ရခေဲထုပျ ၂၂ထုပျအကုနျအားပေးမယျနျော””အဖှားရောငျးတာရောဘယျလောကျကွာပွီလဲ””၁၀ နှဈကြျောသှားပွီ “”တျောတျောတောငျကွာပွီဘဲကဲ အဖှားရဲ့ သမာအာဇီဝ ကကြစြေးရောငျးတာကို ဂုဏျပွုတဲ့အနေ နဲ့ရခေဲထုပျ ၂၂ထုပျ ဖိုး ”
“ဟာပိုကျဆံတှကေအမြားကွီးဘဲ””ဟုတျတယျ တဈသိနျးကပျြပါ အဖှား””ကြေးဇူး အမြားကွီးတငျပါတယျအဖှားစြေးရောငျးနတောတောငျတဈခြို့ကအထငျသေးကွတယျ။အခုလိုအထငျမသေးတဲ့အပွငျကူညီပေးလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျသားရယျ.”
အဖှားစြေးရောငျးတာကို လာပွောပွပေးတဲ့အဈကို ကိုလဲဒီနရောကနေ ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။အဖှားက ရှပေေါက်ကံ(၁၂)ရပျကှကျ မှာရခေဲထုပျလေးတှေ ရောငျးခနြပေါတယျဗြ ။
အားပေးကွပါဦးနျော။😍အခုလို စြေးရောငျးခနြတေဲ့အဖိုးအဖှားတှေ ကိုလှူဒါနျးခှငျ့ရအောငျကြှနျတျောနဲ့အတူ ပါဝငျပေးကွသူမြားလဲကြေးဇူးကမ်ဘာပါခငျဗြာ။🙏🙏🙏ဆိုပွီးရေးသားထားတာလေးကိုပွနျလညျမြှဝဖေျောပွပေးလိုကျရပါနျော
လူရွှင်တော်မိုးစက် ကတော့ လတ်တလော နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ လုပ်ပေးပြီး မွန်မြတ်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အလှူလေးတွေမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ စေတနာရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့ အတူ လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေသာမက အဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုတွေ့ရင်လည်း အမြဲတမ်း တတ်စွမ်းသလောက်ကူညီခဲ့တဲ့ စေတနာကောင်းသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုးစက်က ကိုယ်တိုင်လည်း ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေစုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းသလို အများစုပေါင်းအလှူတွေမှာလည်း လုပ်အားဒါနတွေကူညီလေ့ရှိပါတယ် ။ဒါ့ကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးက မိုးစက်ကို လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။
ဒါတင်မကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတွေကိုလည်း အားလုံးမြင်တွေ့ပြီး ပီတိဖြစ်ရအောင်လည်းရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာထိရေခဲထုပ်ရောင်းပြီး သမာအာဇီဝကျကျလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွားတစ်ဦးအားကူညီခဲ့ပုံကိုပြောထားပါသေးတယ်။
“အရင်တုန်းက ရောင်းကောင်းပါတယ်အခုတော့ တော်တော်ပါးသွားပြီ””မပူပါနဲ့ဗျာအဖွားရေခဲထုပ်ရောင်းနေတာကိုအားပေးဖို့လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့ လူရှိလို့အဖွားဆီကို တကူးတက လာခဲ့တာပေါ့.””ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“ရေခဲထုပ်က ဘယ်လိုရောင်းတာလဲ အဖွား””တစ်ထုပ် ၁၀၀ ပါ””ဒီမှာကျန်တဲ့ရေခဲထုပ် ၂၂ထုပ်အကုန်အားပေးမယ်နော်””အဖွားရောင်းတာရောဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ””၁၀ နှစ်ကျော်သွားပြီ””တော်တော် တောင်ကြာပြီဘဲကဲ အဖွားရဲ့ သမာအာဇီဝ ကျကျဈေးရောင်းတာကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေ နဲ့ရေခဲထုပ် ၂၂ထုပ် ဖိုး ”
“ဟာ.ပိုက်ဆံတွေကအများကြီးဘဲ””ဟုတ်တယ် တစ်သိန်းကျပ်ပါ အဖွား””ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်အဖွား ဈေးရောင်းနေတာတောင်တစ်ချို့က အထင်သေးကြတယ်။အခုလို အထင်မသေးတဲ့အပြင် ကူညီပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်.”
အဖွားဈေးရောင်းတာကို လာပြောပြပေးတဲ့အစ်ကို ကိုလဲ ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဖွားက ရွှေပေါက္ကံ (၁၂) ရပ်ကွက် မှာရေခဲထုပ်လေးတွေ ရောင်းချနေပါတယ်ဗျ ။
အားပေးကြပါဦးနော်။😍အခုလို ဈေးရောင်းချနေတဲ့အဖိုးအဖွားတွေ ကို လှူဒါန်းခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်ပေးကြသူများလဲကျေးဇူးကမ္ဘာပါ ခင်ဗျာ။🙏🙏🙏ဆိုပြီးရေးသားထားတာလေးကိုပြန်လည်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ရပါနော်
“သားအမိ၃ယောကျရဲ့ဝမျးရေးအတှကျ ပဲကတ်တီပါပွုတျရောငျးပွီးရပျတညျနတေဲ့အဖှားအိုတဈယောကျကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူရှငျတျောမိုးစကျ”
January 9, 2022 by Shwengwe Games
ပရိသတျကွီးရလေူရှငျတျောမိုးစကျ အလှူရှငျတှနေဲ့အတူ စီနီယာဆရာသမားတှကေိုရတဲ့ဘကျကအကူအညီတှပေေးနတေဲ့အပွငျ ဘယျအခြိနျဘယျနရောမှာပဲ ဖွဈဖွဈသကျကွီးရှယျအိုတှအေပွငျ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့သူတဈခြို့ကို နိုငျသလောကျထောကျပံ့ပေးတတျသူပါ။ဒီနမှေ့ာလညျး သာစညျမွို့ကို သှားရောကျရငျး ပဲကတ်တီပါပွုတျရောငျးတဲ့အဖှားအိုတဈယောကျကိုကူညီခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
“သာစညျမွို့က ပွနျခါနီးလေးမှာပေါ့.အဖှား ပဲကတ်တီပါပွုတျရောငျးတာ တဈရကျတဈထောငျကြျောလောကျတော့ မွတျတယျ…”ဟငျ..တဈထောငျကြျော…၊ အဖှားတို့ တဈထောငျကြျောနဲ့ စားလောကျပါ့မလား..”မလောကျပါဘူး သားရယျ
နယျမွို့လေးဆိုတော့ နညျးနညျးပါးပါးလေးဘဲရောငျးရတာပေါ့””အဖှားမှာ သမီးတှေ ရှိတယျလို့အဖှားအကွောငျးပွောပွသူတှကေ တဈဆငျ့ သိရပါတယျ..၊ အဲ့ဒီသမီးတှကေရော””အကွီးမ ကတော့ အိမျမှာဘဲယကျကနျးယကျတယျ ၊ တဈရကျ ၂၅၀၀ လောကျတော့ ရတယျ.
အငယျမလေးကတော့သူမြား ယကျကနျးမှာ အလုပျဝငျရတာပေါ့သူလဲ တဈရကျ ၂၀၀၀ လောကျတော့ ရတယျ””ဒါဆို အဖှားတို့ သားအမိ ၃ယောကျတညျးစားလောကျရဲ့လား””ဘယျလောကျမလဲ သားရယျအငယျမလေး ဆေးကုထားတာကွောငျ့ကွှေးမှီလေးတှကေ ထပျတငျနတောအဲ့ဒါလေးတှလေဲ ဖဲ့ဆပျနရေတာပေါ့”
“ဟုတျကဲ့ပါ အဖှားသား ပဲကတ်တီပါပွုတျ တော့ မယူတော့ပါဘူး ။အဖှားကို တဈသိနျး ကနျတော့ခဲ့မယျနျော…ဝမျးသာလိုကျတာသားရယျ…ကြေးဇူးလဲ တငျပါတယျ”ဒီလိုနဲ့ သာစညျမွို့ကို ခတ်ေတရောကျနတေဲ့ကြှနျတျော့အတှကျ ပီတိဖွာနတေဲ့ အပွုံးလေးတဈပှငျ့ မွငျလိုကျရတာပေါ့ဗြာ။အဖှားလဲ အခကျအခဲတှေ ကြျောဖွတျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ကြှနျတျောရောကျသမြှနရောတိုငျးမွငျတှသေ့မြှ အခကျအခဲတှကေိုကူညီခှငျ့ရအောငျပါဝငျလှူဒါနျးပေးကွတဲ့ မိတျဆှအေပေါငျး ကြေးဇူးကမ်ဘာပါခငျဗြာ။🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပကာသနမပါတဲ့လှူဒါနျးမှုလေးအထမွောကျခဲ့ပုံကိုဖောကျသညျခပြွောပွခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်ကြီးရေလူရွှင်တော်မိုးစက် အလှူရှင်တွေနဲ့အတူ စီနီယာဆရာသမားတွေကိုရတဲ့ဘက်ကအကူအညီတွေပေးနေတဲ့အပြင် ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတစ်ချို့ကို နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့ပေးတတ်သူပါ။ဒီနေ့မှာလည်း သာစည်မြို့ကို သွားရောက်ရင်း ပဲကတ္တီပါပြုတ်ရောင်းတဲ့အဖွားအိုတစ်ယောက်ကိုကူညီခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
“သာစည်မြို့က ပြန်ခါနီးလေးမှာပေါ့.အဖွား ပဲကတ္တီပါပြုတ်ရောင်းတာ တစ်ရက်တစ်ထောင်ကျော်လောက်တော့ မြတ်တယ်…”ဟင်..တစ်ထောင်ကျော်…၊ အဖွားတို့ တစ်ထောင်ကျော်နဲ့ စားလောက်ပါ့မလား..”မလောက်ပါဘူး သားရယ်
နယ်မြို့လေးဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးလေးဘဲရောင်းရတာပေါ့””အဖွားမှာ သမီးတွေ ရှိတယ်လို့အဖွားအကြောင်းပြောပြသူတွေက တစ်ဆင့် သိရပါတယ်..၊ အဲ့ဒီသမီးတွေကရော””အကြီးမ ကတော့ အိမ်မှာဘဲယက်ကန်းယက်တယ် ၊ တစ်ရက် ၂၅၀၀ လောက်တော့ ရတယ်.
အငယ်မလေးကတော့သူများ ယက်ကန်းမှာ အလုပ်ဝင်ရတာပေါ့သူလဲ တစ်ရက် ၂၀၀၀ လောက်တော့ ရတယ်””ဒါဆို အဖွားတို့ သားအမိ ၃ယောက်တည်းစားလောက်ရဲ့လား””ဘယ်လောက်မလဲ သားရယ်အငယ်မလေး ဆေးကုထားတာကြောင့်ကြွေးမှီလေးတွေက ထပ်တင်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေလဲ ဖဲ့ဆပ်နေရတာပေါ့”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ အဖွားသား ပဲကတ္တီပါပြုတ် တော့ မယူတော့ပါဘူး ။အဖွားကို တစ်သိန်း ကန်တော့ခဲ့မယ်နော်…ဝမ်းသာလိုက်တာသားရယ်…ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်”ဒီလိုနဲ့ သာစည်မြို့ကို ခေတ္တရောက်နေတဲ့ကျွန်တော့်အတွက် ပီတိဖြာနေတဲ့ အပြုံးလေးတစ်ပွင့် မြင်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။အဖွားလဲ အခက်အခဲတွေ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်သမျှနေရာတိုင်းမြင်တွေ့သမျှ အခက်အခဲတွေကိုကူညီခွင့်ရအောင်ပါဝင်လှူဒါန်းပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်း ကျေးဇူးကမ္ဘာပါခင်ဗျာ။🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပကာသနမပါတဲ့လှူဒါန်းမှုလေးအထမြောက်ခဲ့ပုံကိုဖောက်သည်ချပြောပြခဲ့တာပါ။
တဈလမျးဝငျ တဈလမျးထှကျ နပေူထဲ ရခေဲထုပျရောငျးနရှောတဲ့ အဖှား အတှကျ ကူညီထောကျပံ့ပေးလိုကျပွနျတဲ့ မိုးစကျ
January 8, 2022 by Shwengwe Games
လူရှငျတျောမိုးစကျကတော့ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေိုရယျမောပြျောရှငျစရေုံတငျမကဘဲ လှူဒါနျးမှုတှလေညျး မကွာခဏပွုလုပျနသေူ ဖွဈပါတယျ။
သကျကွီးရှယျအိုအနုပညာရှငျတှကေို လှူဒါနျးနတေဲ့အပွငျ စားဝတျနရေေးခကျခဲကာ ဒုက်ခတှနေဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ အခကျအခဲတှကေိုပါ တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူရဲ့ အလှူလေးတှကေိုလညျး အမြားသူငါ မွငျတှပွေီ့း ပီတိဖွဈရအောငျလညျး အမွဲလိုလို ဝမြှေပေးလရှေိ့ပါတယ။အခုလညျး တဈလမျးဝငျတဈလမျးထှကျ နပေူထဲ ရခေဲထုပျရောငျးနရှောတဲ့ အဖှားကို အတိုငျးမသိ ပြျောရှငျစခေဲ့တဲ့ အလှူလေး တဈခုကို ပွုလုပျခဲ့ပွနျပါတယျ
အလှူနဲ့ပတျသကျပွီးလညျး ”“ရခေဲထုပျတှအေမြားကွီးထညျ့ထားရငျ ပဈလဲနလေို့ နှဈခါခှဲရောငျးရတာပါသားရယျ တဈနလေုံ့းရောငျးမှ ၂၅၀၀ ဘဲ မွတျတာပါ ဈေး မဆဈပါနဲ့နျော”ဒီ ၁၅ ထုပျကို သားအကုနျယူမှာလေ နညျးနညျးတော့ လြော့ပေးပါဦး
”အဖှား တကယျလြော့မရတော့လို့ပါ…” ဟုတျကဲ့ပါ အဖှားဒီမှာ ပိုကျဆံ” သား ပိုကျဆံတှကေ အမြားကွီးဘဲ…” အဲ့ဒါ ၁၅၀၀ မဟုတျဖူးလား” မဟုတျပါဘူးဒါ ၅၀၀ တနျ တှလေား.???” အဖှားသခြောလေးကွညျ့ပါဦး”
တဈသောငျးတနျတှေ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10…၁၀ရှကျတောငျ.ဟီးရော့.ဟာ.မဟုတျဘူးလေ အဖှားကို အကုနျလုံးကနျတော့တာ”တကယျလားဝမျးသာလိုကျတာ…ကြေးဇူးတငျပါတယျသားရယျ
”ဒါဆို ဒီရခေဲထုပျတှကေ …”သားစားရငျ စား ၊ မစားရငျ ဒီနားကလူတှေ ဝလေိုကျတော့လေ ဟုတျပွီဗြာ…ကဲ ပြျောရဲ့လား အဖှား”ပြျောတာပေါ့ သားရယျ.တဈနေ့ လုံးရောငျးမှ ၂၅၀၀ လောကျဘဲရတာလေ အခုက တဈသိနျးကွီးမြားတောငျဆိုတော့ အဖှားအရမျးပြျောတာပေါ့.
”အသကျ(၇၆)အရှယျရောကျနတေဲ့အပွငျ ခါးလေးတှေ ကုနျးပွီး လမျးလြှောကျတာတုနျရီနပေမေယျ့ဇှဲမလြော့ဘဲ ဈေးရောငျးနတေဲ့အဖှားဒျေါတငျရီ ကိုလှူလိုကျရတဲ့ တဈသိနျး ကပျြ ဟာ အားလုံးရငျထဲမှာကနြေပျပီတိဖွဈနမေယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။”ရေးသားဖျောပွထားရာပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
လူရွှင်တော်မိုးစက်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုရယ်မောပျော်ရွှင်စေရုံတင်မကဘဲလှူဒါန်းမှုတွေလည်း မကြာခဏပြုလုပ်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုအနုပညာရှင်တွေကို လှူဒါန်းနေတဲ့အပြင် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကာ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုပါ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ အလှူလေးတွေကိုလည်း အများသူငါ မြင်တွေ့ပြီး ပီတိဖြစ်ရအောင်လည်း အမြဲလိုလို ဝေမျှပေးလေ့ရှိပါတယ်။အခုလည်း တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက် နေပူထဲ ရေခဲထုပ်ရောင်းနေရှာတဲ့ အဖွားကို အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ အလှူလေး တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်
အလှူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ” “ရေခဲထုပ်တွေအများကြီးထည့်ထားရင်ပစ်လဲနေလို့ နှစ်ခါခွဲရောင်းရတာပါသားရယ်တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ ဘဲ မြတ်တာပါ ဈေး မဆစ်ပါနဲ့နော်…” ဒီ ၁၅ ထုပ်ကို သားအကုန်ယူမှာလေ နည်းနည်းတော့ လျော့ပေးပါဦး
”အဖွား တကယ်လျော့မရတော့လို့ပါ…” ဟုတ်ကဲ့ပါ အဖွား…ဒီမှာ ပိုက်ဆံ…” သား ပိုက်ဆံတွေက အများကြီးဘဲ…” အဲ့ဒါ ၁၅၀၀ မဟုတ်ဖူးလား” မဟုတ်ပါဘူးဒါ ၅၀၀ တန် တွေလား..???..” အဖွားသေချာလေးကြည့်ပါဦး”
တစ်သောင်းတန်တွေ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10…၁၀ရွကက်တောင်..ဟီး…ရော့.ဟာ..မဟုတ်ဘူးလေ အဖွားကို အကုန်လုံးကန်တော့တာ.”တကယ်လားဝမ်းသာလိုက်တာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်
”ဒါဆို ဒီရေခဲထုပ်တွေက ”သားစားရင် စား ၊ မစားရင် ဒီနားကလူတွေ ဝေလိုက်တော့လေ… ဟုတ်ပြီဗျာ…ကဲ ပျော်ရဲ့လား အဖွား…”ပျော်တာပေါ့ သားရယ်..တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ လောက်ဘဲရတာလေ အခုက တစ်သိန်းကြီးများတောင်ဆိုတော့ အဖွားအရမ်းပျော်တာပေါ့.
”အသက် (၇၆) အရွယ်ရောက်နေတဲ့အပြင် ခါးလေးတွေ ကုန်းပြီး လမ်းလျှောက်တာတုန်ရီနေပေမယ့်ဇွဲမလျော့ဘဲ ဈေးရောင်းနေတဲ့ အဖွားဒေါ်တင်ရီ ကို လှူလိုက်ရတဲ့ တစ်သိန်း ကျပ် ဟာ အားလုံးရင်ထဲမှာကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
စားဝတျနရေေးအတှကျ ငှကျလေးတှရောငျးပွီး ဖွရှေငျးနရေတဲ့ အသကျ (၆၆)နှဈအရှယျ အဖိုးတဈဦးအား ထောကျပံကူညီပေးခဲ့တဲ့ မိုးစကျ
January 4, 2022 by Shwengwe Games
ယခုတလောမှာမိုးစကျကအရာရာ ခကျခဲနတေဲ့ အခြိနျကာလတှမှောအကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့ မိသားစုတှကေိုတဈဖကျတဈလမျးကနေ ကူညီလှူဒါနျးပေးပွီး စိတျရောကိုယျပါ လုပျဆောငျပေးနတော မို့ ပရိသတျတှလေေးစားခဈြရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
အဘကျဘကျကစားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ကာလကွီးမှာ အလှူရှငျတှနေဲ့စုပေါငျးကာ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ သူတှအေပွငျ လမျးမှတှတေဲ့သကျကွီးရှယျအိုတှကေိုလညျး အကူအညီပေးလကျြရှိသူပါ။
ဒါ့ကွောငျ့လညျးပရိသတျတှအေားလုံးက မိုးစကျကို လေးစားခဈြခငျနကွေတာပါ။ဒါတငျမကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတှကေိုလညျး အားလုံးမွငျတှပွေီ့း ပီတိဖွဈရအောငျလညျးရေးသားဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ ။
ဒီနမှေ့ာလညျး စားဝတျနရေေးအတှကျ ငှကျလေးတှရောငျးပွီး ဖွရှေငျးနရေတဲ့ အဖိုးကို ကူညီထောကျပံ့ခဲ့ပါတယျ။ အဖိုးကတော့ အသကျ (၆၆)နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈပွီး ဗိုလျတဈထောငျစတေီတျောမွတျကွီးနားမှာ ငှကျလေးတှေ လှတျဖို့ရောငျးနတောပါတဲ့။
အဖိုးရဲ့ နာမညျကတော့ ဦးခဈြကောငျး လို့သိရပွီး အဖိုးက ဒလကနေ ဗိုလျတဈထောငျအထိလာရောကျကာ ငှကျတှရေောငျးနခေဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။မိုးစကျကတော့ အဖိုးဆီကနေ ငှကျတှအေကုနျလုံးကို ဝယျယူပွီး အလှူငှေ (၁)သိနျးလှူဒါနျးပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။မိုးစကျကတော့ အဖိုးနဲ့ အတူ ငှကျတှအေကုနျလုံးကို တူတူလှတျပေးခဲ့ပါသေးတယျတဲ့။
အဖိုးကတော့ အလှူငှတှေရေရှိပွီး စားဝတျနရေေးလတျတလောပွလေညျသှားတဲ့အတှကျ ပြျောရှငျနခေဲ့ပွီး အဖိုးရဲ့ ဘဝမှာ ကိုယျရောငျးတဲ့ ငှကျလေးတှဒေီလောကျအမြားကွီး ကိုယျတိုငျပွနျလှတျရမယျလို့တဈခါမှ တှေးမထားဖူးပါဘူးကှယျ ဆိုပွီးတော့လညျး ဝမျသာပီတိဖွဈစှာနဲ့ ရငျထဲကခံစားခကျြတှကေို မြှဝခေဲ့ပါတယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ။
ယခုတလောမှာမိုးစက်ကအရာရာ ခက်ခဲနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ မိသားစုတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းပေးပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာ မို့ ပရိသတ်တွေလေးစားချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဘက်ဘက်ကစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ကာလကြီးမှာ အလှူရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းကာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေအပြင် လမ်းမှတွေ့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်း အကူအညီပေးလျက်ရှိသူပါ။
ဒါ့ကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးက မိုးစက်ကို လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ဒါတင်မကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတွေကိုလည်း အားလုံးမြင်တွေ့ပြီး ပီတိဖြစ်ရအောင်လည်းရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာလည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ငှက်လေးတွရောင်းပြီး ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အဖိုးကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးကတော့ အသက် (၆၆)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဗိုလ်တစ်ထောင်စေတီတော်မြတ်ကြီးနားမှာ ငှက်လေးတွေ လွှတ်ဖို့ရောင်းနေတာပါတဲ့။
အဖိုးရဲ့ နာမည်ကတော့ ဦးချစ်ကောင်း လို့သိရပြီး အဖိုးက ဒလကနေ ဗိုလ်တစ်ထောင်အထိလာရောက်ကာ ငှက်တွေရောင်းနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးစက်ကတော့ အဖိုးဆီကနေ ငှက်တွေအကုန်လုံးကို ဝယ်ယူပြီး အလှူငွေ (၁)သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးစက်ကတော့ အဖိုးနဲ့ အတူ ငှက်တွေအကုန်လုံးကို တူတူလွှတ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။
အဖိုးကတော့ အလှူငွေတွေရရှိပြီး စားဝတ်နေရေးလတ်တလောပြေလည်သွားတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီး အဖိုးရဲ့ ဘဝမှာ ကိုယ်ရောင်းတဲ့ ငှက်လေးတွေဒီလောက်အများကြီး ကိုယ်တိုင်ပြန်လွှတ်ရမယ်လို့တစ်ခါမှ တွေးမထားဖူးပါဘူးကွယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ဝမ်သာပီတိဖြစ်စွာနဲ့ ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ။
“စိတျမနှံ့တဲ့ မွေးမလေး နဲ့ အဈမကို ပဲပွုတျရောငျးပွီးရှာကြှေးနတေဲ့ အသကျ၇၀အရှယျ အမကွေီးအား ကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ မိုးစကျ”
January 2, 2022 by Shwengwe Games
ပရိသတျကွီးရလေတျတလောမှာပရဟိတ လုပျငနျးတှရေရငျရသလို ပွုလုပျနသေူတှထေဲမှာ လူရှငျတျောမိုးစကျလညျးအပါအဝငျပါပဲနျော။ အဘကျဘကျကစားဝတျနရေေးခကျခဲနတေဲ့ကာလကွီးမှာ အလှူရှငျတှနေဲ့စုပေါငျးကာ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ သူတှအေပွငျ လမျးမှတှတေဲ့သကျကွီးရှယျအိုတှကေိုလညျး အကူအညီပေးလကျြရှိသူပါ။
ဒီနမှေ့ာတော့ မိုးစကျက “စိတျမနှံ့တဲ့ မွေးမလေး နဲ့ အဈမဖွဈသူတို့ကိုခွထေောကျမကောငျးတဲ့ကွားက ပဲပွုတျလေးရောငျးပွီး ရှာဖှကြှေေးမှေးနတေဲ့ အသကျ (၇၀) အရှယျ အမအေိုကွီးကို ၁သိနျးကပျြ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
အဖှားက တောငျဒဂုံ (၂၆) ရပျကှကျမှာ မနကျပိုငျး စားတျောပဲပွုတျ နဲ့ ညနပေိုငျး ပဲကတ်တီပါပွုတျတို့ကို ရောငျးခလြကျြရှိပါတယျ”လို့ မြှဝထေားတာလေးကိုပွနျလညျတငျပွလိုကျရပါတယျ
ပရိသတ်ကြီးရေလတ်တလောမှာပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေရရင်ရသလို ပြုလုပ်နေသူတွေထဲမှာ လူရွှင်တော်မိုးစက်လည်းအပါအဝင်ပါပဲနော်။ အဘက်ဘက်ကစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ကာလကြီးမှာ အလှူရှင်တွေနဲ့စုပေါင်းကာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေအပြင် လမ်းမှတွေ့တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်း အကူအညီပေးလျက်ရှိသူပါ။
မိုးစက်က ကိုယ်တိုင်လည်း ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေစုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းသလို အများစုပေါင်းအလှူတွေမှာလည်း လုပ်အားဒါနတွေကူညီလေ့ရှိပါတယ် ။
ဒီနေ့မှာတော့ မိုးစက်က “စိတ်မနှံ့တဲ့ မြေးမလေး နဲ့ အစ်မဖြစ်သူတို့ကိုခြေထောက်မကောင်းတဲ့ကြားက ပဲပြုတ်လေးရောင်းပြီး ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့ အသက် (၇၀) အရွယ် အမေအိုကြီးကို ၁သိန်းကျပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အဖွားက တောင်ဒဂုံ (၂၆) ရပ်ကွက်မှာ မနက်ပိုင်း စားတော်ပဲပြုတ် နဲ့ ညနေပိုင်း ပဲကတ္တီပါပြုတ်တို့ကို ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်”လို့ မျှဝေထားတာလေးကိုပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်
ကှယျလှနျသူ မကျြမမွငျ ဓားသှေး အဘအား လစဉျထောကျပံ့ငှထေဲမှလကျကနျြငှလေေးဖွငျ့ အဘတှကျရညျစူးပွီးကုသိုလျကောငျးမှုမြားပွုလုပျလုပျပေးခဲ့တဲ့ မိုးစကျ
December 31, 2021 by Shwengwe Games
မိုးစကျကတော့ ခုလိုကာလတှမှောသူကိုယျတိုငျရှာဖှထေားတဲ့ခြှေးနှဲစာအပွငျ (၇)ရကျသားသမီးအလှူရှငျတှနေဲ့ စုပေါငျးပွီး အခကျအခဲဖွဈနသေူတှကေို စာနာစိတျဖွငျ့ လိုကျလံကူညီနတောမို့ အမြားက လေးစားနရေတာပါ။ဒါ့အပွငျ အနုပညာ အသိုငျးအဝိုငျးထဲက ခကျခဲနတေဲ့ သကျကွီးပိုငျးတှကေိုလညျး ကူညီ ထောကျပံ့ပေးလကျြရှိပါတယျ ။
အခုလညျး သူလစဉျထောကျပံ့ပေးနတေဲ့မကျြမမွငျ ဓားသှေးတဲ့ အဘ ကှယျလှနျသှားတာကွောငျ့ သူရဲ့ကနျြရှိနတေဲ့ငှတှေထေဲက အဘအတှကျ ရညျစူးပွီးအလှူအတနျးမြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ပေးဖွဈခဲ့ကွောငျး ရေးသားဝမြှေလာပါတယျ။
အလှူနဲ့ ပတျသကျပွီး ”ကှယျလှနျသူ(မကျြမမွငျဓားသှေး )အဘ ဦးမောငျကွိုငျ အသကျ(၇၁) နှဈ ရဲ့ လစဉျထောကျပံ့ငှေ ကြှနျတေျာ့ဆီမှာ(၁၀)သိနျးတိတိကနျြခဲ့ပါတယျ။
” ဒီနေ့ (30.12.2021) နမှေ့ာ….ဘဘ ဦးမောငျကွိုငျ နာရေးအသုံးပွုရနျအတှကျ ၅)သိနျးကပျြ ပေးခဲ့ပွီး…Royal Asia Myanmar သောကျရသေနျ့မှသောကျရသေနျ့ကဒျ (၃၀)ပါဝငျလှူဒါနျးပေးပါတယျဘဘ ရဲ့ဇာတိမွမွေဈခွမွေို့ ဆညျးဆာအေးရိပျ ဘိုးဘှားစောငျ့ရှောကျမှူဂဟော အတှကျ၁သိနျး ကပျြ ။
ခဝဲ ခွံ မကျြမမွငျစောငျ့ရှောကျရေးဂဟောအတှကျ၁သိနျးကပျြ။ရမကျြစိကှယျနတေဲ့အပွငျကိုယျလကျထုံကငျြရောဂါမြားကွောငျ့ဆရာထူးခနျ့ကြျောဆီမှာပွသနရေတဲ့ ဆရာလေး ဒျေါပညာစာရီ အတှကျ ၁သိနျးကပျြ ။
Shake ဆိုငျမှပေါငျမုနျ့လေးတှယေူပွီး မွို့ထဲမှာလှညျ့လညျရောငျးခနြသေော အသကျ(၇၈)အရှယျ အဘဦးသာ အတှကျ ၁သိနျးကပျြ။အသကျ (၉၀)ကြျော မိခငျကွီးကို ရှာဖှေ ကြှေးမှေးနတေဲ့ ကိုယျတိုငျခြုပျအိတျမြားရောငျးခသြော အဘ ဦးတငျဝငျး အတှကျ..၁သိနျးကပျြ ။အသီးသီး ခှဲဝေ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ။
ဤသို့လှူဒါနျးပေးရသော အကြိုးအားကွောငျ့ဘဘဦးမောငျကွိုငျတဈယောကျ နောကျဘဝမြားလူဖွဈခှငျ့ရခဲ့ပါလြှငျ စက်ခုနှဈကှငျး အလငျးရ၍ ကိုယျခန်ဓာ ၊အသိပညာ ခြို့ယှငျးမှူကငျးသော လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးဖွဈနိုငျပါစခေငျဗြာ။ရောကျရာဘုံဘဝမှ သာဓု အနုမောဓနာ ချေါဆိုနိုငျပါစေ ”ရေးသားထားရာပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
မိုးစက်ကတော့ ခုလိုကာလတွေမှာ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတဲ့ ချွေးနှဲစာ အပြင် (၇) ရက်သားသမီး အလှူရှင်တွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတွေကို စာနာစိတ်ဖြင့် လိုက်လံ ကူညီနေတာမို့ အများက လေးစားနေရတာပါ ။ ဒါ့အပြင် အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ခက်ခဲနေတဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေကိုလည်း ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ် ။
အခုလည်း သူလစဉ်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ မျက်မမြင် ဓားသွေးတဲ့ အဘ ကွယ်လွန် သွားတာကြောင့် သူရဲ့ ကျန်ရှိနေတဲ့ ငွေတွေထဲက အဘအတွက် ရည်စူးပြီး အလှူအတန်းများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားဝေမျှလာပါတယ် ။
အလှူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” ကွယ်လွန်သူ (မျက်မမြင်ဓားသွေး ) အဘ ဦးမောင်ကြိုင် အသက် (၇၁) နှစ် ရဲ့ လစဉ်ထောက်ပံ့ ငွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ (၁၀) သိန်းတိတိ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
” ဒီနေ့ (30.12.2021) နေ့မှာ….ဘဘ ဦးမောင်ကြိုင် နာရေးအသုံးပြုရန်အတွက် ၅) သိန်းကျပ် ပေးခဲ့ပြီး…Royal Asia Myanmar သောက်ရေသန့်မှ သောက်ရေသန့်ကဒ် (၃၀) ပါဝင်လှူဒါန်းပေးပါတယ် ဘဘ ရဲ့ ဇာတိမြေ မြစ်ခြေမြို့ ဆည်းဆာအေးရိပ် ဘိုးဘွားစောင့်ရှောက်မှူဂေဟာ အတွက် ၁သိန်း ကျပ် ။
ခဝဲ ခြံ မျက်မမြင်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအတွက် ၁သိန်းကျပ် ။ရမျက်စိကွယ်နေတဲ့အပြင် ကိုယ်လက်ထုံကျင်ရောဂါများကြောင့်ဆရာထူးခန့်ကျော်ဆီမှာ ပြသနေရတဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်ပညာစာရီ အတွက် ၁သိန်းကျပ် ။
Shake ဆိုင်မှ ပေါင်မုန့်လေးတွေယူပြီး မြို့ထဲမှာ လှည့်လည်ရောင်းချနေသော အသက် (၇၈) အရွယ် အဘဦးသာ အတွက် ၁သိန်း ကျပ် ။ အသက် (၉၀) ကျော် မိခင်ကြီးကို ရှာဖွေ ကျွေးမွေးနေတဲ့ ကိုယ်တိုင်ချုပ်အိတ်များရောင်းချသော အဘ ဦးတင်ဝင်း အတွက်..၁သိန်းကျပ် ။ အသီးသီး ခွဲဝေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ဤသို့လှူဒါန်းပေးရသော အကျိုးအားကြောင့်ဘဘ ဦးမောင်ကြိုင် တစ်ယောက် နောက်ဘဝများ လူဖြစ်ခွင့်ရခဲ့ပါလျှင် စက္ခုနှစ်ကွင်း အလင်းရ၍ ကိုယ်ခန္ဓာ ၊အသိပညာ ချို့ယွင်းမှူကင်းသော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ ရောက်ရာဘုံဘဝမှ သာဓု အနုမောဓနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေ ” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
မကျြစိမမွငျသျောလညျး ဓားသှေးပွီး ဝမျးရေးဖွရှေငျးနရေလို့ လစဉျကူညီထောကျပံ့ပေးခဲ့တဲ့ အဘ ဦးမောငျကွိုငျ ရဲ့ စိတျမကောငျးစရာသတငျးကိုပွောလာတဲ့ မိုးစကျ
December 30, 2021 by Shwengwe Games
ပရိသတျကွီးရေ မိုးစကျကတော့ ဝမျးရခေကျခဲစှာဖွရှေငျးနရေတဲ့ သကျကွီးရှယျအို အဖိုးအဖှားတှကေို သူရဲ့အလှူရှငျတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး လိုကျလံကူညီထောကျပံ့ပေးနတောပရိသတျတှလေညျးသိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါနျော။
မိုးစကျကူညီထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ အဖိုးအဖှားတှထေဲက ဓားသှေးပွီး ဝမျးရေးဖွရှေငျနရေတဲ့ မကျြမမွငျ အဘ ဦးမောငျကွိုငျကိုပရိသတျတှမှေတျမိမယျထငျပါတယျနျော။
အဘဦးမောငျကွိုငျကတော့ မနကေ့ နလေ့ညျ(၁၁း၅၅)မိနဈမှာ ဘဝတဈပါးကိုပွောငျးရှကှေ့ယျလှနျသှာဒခဲ့ပါတယျ။ မိုးစကျကတော့ အဘရဲ့ နာရေးသတငျးလေးကို စိတျမကောငျးစှာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝဖေျောပွလာခဲ့ပါတယျ။
”အလှူရှငျမြားရဲ့ လှူဒါနျးငှမြေားနဲ့ ကြှနျတျော လစဉျထောကျပံ့ပေးနရေတဲ့ဓားသှေးတဲ့ မကျြမမွငျ အဘ ဦးမောငျကွိုငျအသကျ (71) နှဈ ဟာ…ဒီနေ့ နလေ့ညျ(11:55) မိနဈမှာ ကှယျလှနျသှားရှာပါပွီ ။
ဒီဇငျဘာ (၁၅) ရကျနကေ့ ဘဘ ဆီထောကျပံ့ငှေ ပေးရငျး တှခေဲ့ရတာနောကျဆုံးဖွဈမယျမှနျးမသိခဲ့ပါဘူး။ဘဘ ဦးမောငျကွိုငျတဈယောကျကောငျးရာသုဂတိလားပါစေ ။”ဆိုပွီးအဘရဲ့နာရေးကိုစိတျမကောငျးစှာနဲ့ပဲ အဘကိုကူညီထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ အလှူရှငျတှေ သိရှိအောငျ မြှဝဖေျောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ
ပရိသတ်ကြီးရေ မိုးစက်ကတော့ ဝမ်းရေခက်ခဲစွာဖြေရှင်းနေရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားတွေကို သူရဲ့အလှူရှင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လိုက်လံကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာပရိသတ်တွေလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။
မိုးစက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေထဲက ဓားသွေးပြီး ဝမ်းရေးဖြေရှင်နေရတဲ့ မျက်မမြင် အဘ ဦးမောင်ကြိုင်ကိုပရိသတ်တွေမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
အဘဦးမောင်ကြိုင်ကတော့ မနေ့က နေ့လည်(၁၁း၅၅)မိနစ်မှာ ဘဝတစ်ပါးကိုပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်သွာဒခဲ့ပါတယ်။ မိုးစက်ကတော့ အဘရဲ့ နာရေးသတင်းလေးကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။
”အလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းငွေများနဲ့ ကျွန်တော် လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးနေရတဲ့ဓားသွေးတဲ့ မျက်မမြင် အဘ ဦးမောင်ကြိုင်အသက် (71) နှစ် ဟာ…ဒီနေ့ နေ့လည်(11:55) မိနစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ ။
ဒီဇင်ဘာ (၁၅) ရက်နေ့က ဘဘ ဆီထောက်ပံ့ငွေ ပေးရင်း တွေ့ခဲ့ရတာနောက်ဆုံးဖြစ်မယ်မှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။ဘဘ ဦးမောင်ကြိုင်တစ်ယောက်ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ ။”ဆိုပြီ အဘရဲ့နာရေးကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဘကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အလှူရှင်တွေ သိရှိအောင် မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်